guniea7၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်guniea7ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
♣တောသူမလေး♣ သည်guniea7ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
guniea7 shared မေချစ်ဦး's photo on Facebook
guniea7 သည်နီစံ (အနီ)'s ၏ 'အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ တရားတော်များ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
guniea7 သည် ♣တောသူမလေး♣'s၏ 'အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
guniea7 replied to ကျော်ကို's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ..လူငယ်စကားဝိုင်း..။'
"the lord Buddha told not to do any evil. control your bodily action. and also not to speak any evil. and not to think any evil. the word evil means the action which can cause any harms to others. most of the people in the world speak everyday. but…"
မေ 21, 2012
"ီDeath isaleveler... The rich die and so do the poor. The ugly and the beautiful ones also die. Noone can escape from death... You also must die... The date of death is coming nearer and nearer..."
guniea7 replied to နီစံ (အနီ)'s discussion 'လောကုတ္တရာ စာမေးပွဲ ကဏ္ဍ'
guniea7 shared Sai Lao Kham's blog post on Facebook
guniea7 သည်Sai Lao Kham's ၏ 'ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆရာတင်မလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
guniea7 သည် Sai Lao Kham's၏ 'ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆရာတင်မလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"thanks for your advice... i am really absorbed in vipassana."
guniea7 သည် linlatarkar's၏ 'ဓူတင်(၁၃)ပါး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဓုတင် ၁၃ ပါးရဲ့အကြောင်းကိုအကျဉ်းသိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....အကျယ်လဲသိချင်ပါတယ်"
guniea7 သည် A BuddhismworldAdmin's၏ 'အဖွဲ့ဝင်အသစ်အတွက်ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်ထဲဝင်ရန်လမ်းညွန်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"The Buddha taught us to mind ourselves. Not to care others."
guniea7 joined A BuddhismworldAdmin's group
guniea7 postedastatus
8:17pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:21pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:36pm အချိန်မတ် 23, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။